စာသားကြားခဲ့ရသော UCSB ကျောင်းသားများပြောခဲ့သည် - နှုန်းထားများ
စာသားအရ UCSB ကျောင်းသားများပြောသောအရာများ
UCSB သည် U Can Study Buzzed ၏အတိုကောက်ဖြစ်ပြီးနာမည်ကျော်ကြားသည့်အတွက်ကြောင့်ဤကျောင်းသားများသည်သူတို့၏တနင်္ဂနွေလေ့လာရေးခရီးမှသူတို့ update လုပ်သောအရာအထိပြောဆိုရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ (သို့မဟုတ်ထူးဆန်းသော) ခေါင်းစဉ်များအမြဲရှိသည်မှာကျွန်ုပ်သံသယမရှိပါ။ သူတို့ရဲ့မိခင်များအပေါ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နားကြပ်များနှင့်ကျောင်းဝင်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လမ်းဖောက်ခြင်း၏အချိန် ၉၈% တွင်ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အခန်းထဲမှထွက်လာသည့်အချိန်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်အတန်းထဲတွင်ထိုင်မိသည့်အချိန်အထိကျွန်ုပ်၏နားကြပ်နှစ်ခုရှိသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်၌ဖြစ်ပျက်နေသောစကားဝိုင်းများကိုအမြဲမဖမ်းမိပါ။ သို့သော်ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်၏နားကြပ်များကိုတစ်ပတ်လုံးဖယ်ထားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်၌လူများပြောနေသည့်အရာအကြောင်းကိုနားထောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ရလဒ်များ? မင်္ဂလာပါ။
ဒါကြောင့်ဒီကလပ်ကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒါကိုကျွန်တော်တောင်မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အရူး ။ ငါတို့သူငယ်ချင်းရဲ့ရည်းစားလိုပဲရန်ဖြစ်တာနဲ့ငါတို့သူငယ်ချင်းကဖုန်းပျောက်သွားတယ်။ အလေးအနက်ထားလိုပါသလား ကောင်းပြီ, ငါတို့သိသာမူးခဲ့ကြပေမယ့် yeah ကအရူးဖြစ်ခဲ့သည်
Girvetz ဟောပြောပွဲခန်းမ - ည ၃း၃၀
မိန်းကလေး ၁ ။ * နှာခေါင်းမှုတ်ခြင်း *
မိန်းကလေး ၂ - Flog Gnaw မှာမင်းနေမကောင်းဖြစ်လား
မိန်းကလေး ၁ - Flog Gnaw မှာငါနေမကောင်းဖြစ်
မိန်းကလေး ၂ ။
သိပ်အများကြီးမည်မျှ whippets များမှာ
မိန်းကလေး ၁ ။
Santa Catalina ဓာတ်လှေကား - ည ၈ နာရီ
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ယောက်ျားတွေဒီဥပဒေအပြောင်းအလဲကအရေးမကြီးဘူး။ ငါနဲ့တူတဲ့၊ မကျန်းမာတဲ့ဆေးပေါင်းများစွာနဲ့သူတို့ရဲ့ကားတွေထဲမှာရှိသူတွေကိုငါသိတယ်။ ငါအသေးစားရောင်းသူပြောနေတာပေါ့လိုပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ကားများတွင်။ * စကားပြောနေစဉ် CSO အရာရှိမှဓာတ်လှေကားမှထွက်လာသည်။
Santa Catalina ၁၀ ထပ် Lounge - ည ၉း၃၀
Guy: ဒီတနင်္ဂနွေနေ့က LA မှာလိင်တူချစ်သူဘားကိုငါသွားမယ်။ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။
Guy: Honey ငါအဲဒီမှာမောင်းတော့မယ်။ ဒီတော့ turnt၊ ဘားကိုသွား၊ ပိုပြီး turnt လုပ်ပါ၊ နောက်တစ်နေ့နောက်တစ်နေ့ပြန်မောင်းတယ်။
ည ၉း၀၀ နာရီ - ကခုန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အဝေးပြေးလမ်းတွင်
Guy 1: မင်းငါ့ကို ၁၂ ထပ်ကြိုက်လို့ရမလား။ (အထပ် ၁၀ ခုသာ)
မိန်းကလေး - အိုးအဲဒါငါကောင်းလိုက်တာ
Guy 2: ဟဟားဟမ်ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟင်းဟင်ဟင့်ငါပြောတာကငါ့ဆီကနေယူခဲ့တာပါ။
Santa Catalina ဓာတ်လှေကား - ည ၇း၀၀
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ကျွန်မနို့သီးခေါင်းကိုထိုးဖောက်ဖို့တောင်မကြောက်မိဘူး။ သူကတတ်နိုင်သလောက်ညှစ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ငါကောင်းမယ်ထင်တယ်။
ကျောင်းဝင်းတွင် - ညနေ ၆း၁၅ နာရီ
နှစ် ဦး စလုံးအဆိုပါဓာတ်လှေကား6အိုးငါ၏အ fuck ဆိုတဲ့တောင်ကုန်းအဘို့အကြှနျုပျ၏ gosh ပြေးငါမှန်သလော?!
Santa Catalina ၆ ထပ် - ည ၁၁း၃၀
အင်းငါကောင်းကောင်းအိပ်ခဲ့ရတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါကောင်းကောင်းမအိပ်ခဲ့ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်? ငါစင်ကြယ်သော freaking ခဲ့ကြလို့ပဲ, ဒါကြောင့် ... သင်ပျင်းရိဖြစ်ခြင်းအဘို့အကြှနျုပျကိုနို့စို့မယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာဆွဲထား။
ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် - ည ၇း၄၅
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်မှာကျွန်တော့်နားကြပ်ကိုစွန့်လွှတ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ငါကဒီမှာဖြစ်ခြင်းကတည်းကငါ့အသက်ရှူမရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တယ်, ဒါမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုများရုံ Hilary ကြောင့်ရိုးရိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ပါးစပ်ထဲကမှထွက်လာ။ , သို့မဟုတ်ပါကသူတို့အားအချိန်လေးတစ်ခုလုံးရက်သတ္တပတ်ရဲ့တန်ဖိုးရှိရှိသည်ဖို့ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ခဲ့သည်ကြားနာထံမှဖြစ်စေ။ သင်ဓာတ်လှေကား၌ရပ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ အတန်းထဲတွင်ပါမောက္ခကိုစောင့်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးရွားသည့်နေ့တစ်နေ့မှောက်ပြီးဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးကျပ်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နားရွက်